title_temp Ndị mmeputa | drdmserver1.com
Peeji emelitere emelitere ikpeazụ: Jun 25, 2020
Ego oru Onye mmeputa
Nduziaka, ego oru, na ngwaoru maka ndị mmeputa na-aru na Ethereum.
Ọ bụrụ na ị bụ onye ọhụrụ na mmepe Ethereum, ị nọ ebe ziri ezi. Ntụziaka ndị a nke obodo Ethereum dere ga-ewebatara gị ihe kacha di mkpa nke kpokotara Ethereum ma webata akuku echiche di mkpa nke nwere ike ịdị iche na mmepe ngwa komputa ndị ọzọ ị maara.
Chọrọ ederede mbido di mkpa nke mbụ? Lelee drdmserver1.com/ig/learn/
July 24, 2018 - Facu Spagnugfolo
Emelitere otutu mgbe - ConsenSys
Emelitere ohuru otutu mgbe- Joshua Cassidy
Asụsụ Nkwekọrịta Amamihe
Nhazi n'ihu ọ bụla na-aru oru na Ethereum Emebere maka Nkekorita ngwaoru komputa (EVM) bu nke a na akpọkarị "nkwekọrịta amamihe". Asụsụ ndị kachasị ewu ewu maka ide nkwekọrịta amamihe na Ethereum bu Nke siri ike na Vyper2020欧冠比赛时间, n'agbanyeghị na enwere.
Vyper Asụsụ nchekwa elekwasịrị anya maka Ethereum, dabere na Python.
I na-achọ nhọrọ ndị ọzọ?
Ngwaọrụ Onye mmepụta
Ethereum nwere ọtụtụ ngwaọrụ na-eto eto buru ibu iji nyere ndị mmeputa aka iwulite, nwalee ma hazie ngwaoru komputa ha. N'okpuru ebe a bụ ngwaọrụ ndị kachasị ewu ewu eji mee ka i malite. Ọ bụrụ na ịchọrọ ịmụtakwu ihe, lelee nke a .
Truffle Gburugburu ebe mmepe, nnwale ihe owuwu, ruo usoro mbunye ihe na ngwaọrụ ndị ọzọ.
Ibido Gburugburu mmepe, nnwale ihe owuwu, na ngwaọrụ ndị ọzọ etinyere na Ethereum, IPFS, na Whisper.
Waffle Usoro ihe owuwu maka mmepe nkwekọrịta oganihu amamihe na nwale (dabere na ethers.js).
Etherlime Ethers.js ntọala ihe owuwu maka mmepe dapp (Siri ike & Vyper), idebe ihe, mmezi, nnwale na ndị ọzọ.
Buidler Onye na-agba ọsọ oru maka ndi mmeputa nkwekorita amamihe nke Ethereum
ZeppelinOS Usoro mmepe maka iwulite nkwalite nkwekọrịta smart na ijikwa ngwa nkwekọrịta smart.
Na-achọ nhọrọ ndị ọzọ?
Ihe Mgbakwunye Gburugburu Ulo (IDEs)
Koodu Nlere Anya Okachamara na ikpo okwu IDE ya na ndi isi nkwado Ethereum.
Remix IDE ntanetị nke etinyere na nyocha nke static, yana ule igwe nyocha blockchain..
IDE ntanetị nke etinyere na nchọgharị blockchain mebere ịgwe, ntinye MetaMask, njikwa azụmahịa na atụmatụ ndị ọzọ
EthFiddle IDE ntanetị nke na-enye gị ohere ide, chịkọtara ma dezie nkwekọrịta smart gị.
light.js Ihe mmeghachi omume dị elu akwukwo nke JS emebere nke oma maka ndi ahia
Web3-wrapper Typescript ozo ka Web3.js
Infura Ethereum API dịka ọrụ
Ngwa ọrụ nchekwa
Slither Solidity Ederede nyocha usoro static in Python 3
MythX Nyochaa nchedo Security maka nkwekọrịta smart Ethereum
Manticore Ntụgharị aka akara iwu na-eji ngwa ọrụ ọgbụgba arụmọrụ eme ihe na nkwekorita contracts na ọnụọgụ abụọ.
Securify nchekwa maka nkwekọrịta smart Ethereum
Ihe ndi ozo na akwụkwọ nyocha
Solidity-Coverage Ngwunye mkpuchi koodu siri ike ọzọ.
hevm Mmejuputa EVM mere maka ule nnwale na ịmegharị ụdị nkwekọrịta smart.
Whiteblock Genesis Ihe eji emeputa ogwugwu rue ogwugwu na ikpo okwu nnwale maka blockchain.
Gbochie ndị na-eme nchọpụta
Gbochie ndị na-eme nchọpụta bụ ọrụ na-ahapụ gị ka ịgagharị na Ethereum blockchain (yana akwụkwọ nyocha ya), site na ịchọta ozi gbasara azụmahịa ndị akọwapụtara, mgbochi, nkwekọrịta, na ọrụ ndị ọzọ.
Akwụkwọ edemede na Faucets
Obodo Ethereum na-ejigide ọtụtụ akwụkwọ nyocha. Ndị mmepe na-eji ihe ndị a eme ihe iji nwalee ngwa ha n'okpuru ọnọdụ dị iche iche tupu ha ebuga ya na isi Ethereum.
Ropsten Akaebe nke Ọrụ blockchain, nnwale-ether nke enwere ike igwu egwu
Rinkeby Akaebe nke ikike blockchain, nke edoziri site n'aka Geth development team
Goerli Cross-client Proof of Authority blockchain, nke ndị obodo Goerli wuru ma lekọta ya
Ndị ahịa na Na-agba node gi
Ngwunye Ethereum mejuputara otutu onu ogugu ndi n’agba software ndia ahia dakọtara. Ọtụtụ n'ime noodu ndị a na-agba Geth 2020欧冠比赛时间 or , nke ọ bụla nwere ike ịhazi ya n'ụzọ dị iche iche dịka mkpa si wee dị.
Geth ndị ahịa Ethereum edere na Go
Parity Ndi ahia Ethereum edere na Rust
Ethnode Gbaa otu uzo Ethereum noodu (Geth or Parity) maka mmepe obodo.
Omume kachasị, usoro, na usoro mgbochi
DappSys Ihe nchebe, mfe, na-agbanwe mgbanwe maka nkwekọrịta smart.
OpenZeppelin Ọbá akwụkwọ maka mmepe nkwekọrịta smart.
aragonOS nsoro maka nkwalite & njikwa ikike.
Nkwekorita aha adịghị ike Smart
Smart Nkwekọrịta Arụ Ọrụ kachasị mma
Nkwado Onye Mmepụta na Ọzụzụ
Ebe a na-anọ akparịta ụka Ethereum Gitter niile
Cryptozombies Mụta ka ịdee egwuregwu koodu na ethereum.
Chainshot Nkuzi ederede dabere na web.
Blockgeeks Usoro nkuzi n'ịntanetị na teknụzụ blockchain
DappUniversity Mụta i wu ngwa ndị adaghi achikwa achikwa na Ethereum blockchain
Ethernaut Solidity dabere na wargame ebe ọkwa ọ bụla bụ nkwekọrịta a ga-emebi
Obodo Ethereum anabatala ọtụtụ standadi nke na-enyere ndị mmepe aka. A na-ewebata ndị a dika Aro Maka Ethereum (EIPs), nke ndị otu obodo na-atụle site na usoro standadi .
Ndepụta nke EIPs
Ufọdụ EIP na-emetụta ụkpụrụ ọkwa ngwa (dịka ọmụmaatụ usoro nkwekọrịta smart), nke ewepụtara ka Achọrọ arịrịọ Ethereum maka nkọwa (ERC). Ọtụtụ ERC bụ standadi dị oke mkpa a na eji ọtụtụ ebe na gburugburu Ethereum.
ERC20 - Ihe standadi nke tokens
ERC721 - Onwe ihe standadi omumu maka ihe omuma nke anaghi ego
Weebụsaịtị gara aga emelitere emelitere: Jul 01, 2020
Gini bu Ethereum?